रक्सीसँगै चुरोट पिउँदाका बेफाइदाहरु
12825 पटक पढिएको
सामान्यतया अन्य बेला चुरोटको धुवा नजिक आउँदा नाक थुन्नेहरु मदिरा पिउदा हातमा चुरोट सल्काउँदै धुवा उडाउने गर्दछन् । तर व्रिटेनका अनुसन्धानकर्ताले मानवीय स्वास्थ्यका लागि मदिरा पिउदा चुरोट पिउनु सवैभन्दा बढि खतरनाक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । ७५० मिलिलिटर मदिरा पिउँदा ५ चुरोट पिउने ब्यक्तिलाई क्यान्सरको बढि खतरा हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रक्सी पिउनेहरुका लागि चुरोट पिउनु धेरै गुना खतरनाक हुने र त्यसकै कारण क्यान्सरको विरामी हु्ने बताएका छन् । यो जोखिम कम गर्ने एउटा मात्र उपाए छ, त्यो हो मदिरा पिउँदा चुरोट पिउन पूर्णरुपमा बन्द गर्नु, अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन् । नेपालीहरुका लागि मदिराको कुनै लिमिट हुँदैन । तर अनुसन्धानकर्ताले एकजना महिला वा पुरुषले एक सातामा १४ युनिटभन्दा बढी रक्सी पिउनु नुहँने बताएका छन् । तीन लिटर बियर वा ६ गिलास वाइन मात्र एक सातामा पिउनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । तर अस्वस्व्स्थ ब्यक्तिका लागि भने रक्सी पिउनु खतरा हुने बताएका छन् ।
‘बीएमसी पब्लिक हेल्थ’को एउटा लेखमा अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् यदि चुरोट नपिउने १ हजार पुरुष वा १ हजार महिलाले एक सातामा एक बोतल रक्सी पिए भनेपनि १० गुना क्यान्सरको समस्या रहन्छ । रक्सी पिउने महिलामा स्तन र पुरुषमा पेट तथा कलेजोको क्यान्सरको बढि खतरा हुन्छ । एउटा अनुसन्धानले एक सातामा ७५० मिलिलिटर रक्सी पिउँदा सोही अवधिमा महिलाले १० र पुरूषले ५ वटा चुरोट पिउँदा बराबरकै क्यान्सरको खतरा उत्पन्न हुने देखाएको छ।ब्रिटेनका अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्, “यो कम रक्सी पिउँछु भन्नेहरूलाई जागरूक गर्ने एउटा उपयुक्त तरिका हो।” विशेषज्ञहरूका अनुसार अधिकांश रक्सी पिउनेहरूका लागि रक्सीका तुलनामा चुरोट पिउनु धेरै खतरनाक हुनसक्ने र त्यसबाट क्यान्सर लाग्न सक्ने खतरा बढ्ता रहन्छ। र, त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्ने एउटा मात्र तरिका हो( चुरोटलाई पूर्णरूपमा त्याग्नु। सरकारी निर्देशिका अनुसार एकजना महिला वा पुरुषले एक सातामा १४ युनिटभन्दा बढी रक्सी पिउनु उपयुक्त हुँदैन। यो भनेको लगभग साढे तीन लिटर बियर वा ६ गिलास जति वाइन बाराबर हो। उक्त अनुसन्धानमा कसैको स्वास्थ्य खतरमा रहेको छ भने रक्सी पिउने कुनै मात्रा तय गर्नु ठीक नहुने उल्लेख छ। अनुसन्धानले कम रक्सी पिउनेमा पनि क्यान्सरको खतरा रहने देखाएको छ।
‘बीएमसी पब्लिक हेल्थ’को एउटा लेखमा अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्( यदि चुरोट नपिउने १ हजार पुरुष वा १ हजार महिलाले एक सातामा एक बोतल रक्सी पिए भने लगभग १० जना भन्दा बढी पुरूष र १४ जना भन्दा बढी महिलालाई उनीहरूको जीवनकालमा क्यान्सरको खतरा बढाइदिन्छ।
रक्सी पिउने महिलामा स्तन र पुरुषमा पेट तथा कलेजोको क्यान्सरको खतरा बढी हुनसक्छ। उक्त अनुसन्धानमा सहभागी अनुसन्धानकर्ताहरूले क्यान्सर रिसर्च यूकेको क्यान्सरको खतरामा आधारित तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गरेका हुन्। त्यसका साथै उनीहरूले सुर्ती र रक्सीका कारण हुने क्यान्सर रोगीहरूको तथ्याङ्कको पनि अध्ययन गरेका थिए। स्तन क्यान्सरको अनुसन्धान गर्ने डा। मिनौक सोमेकरले भने, “अनुसन्धानले रोचक कुराहरू अगाडि ल्याएको छ तर त्यसको तस्बिर स्पष्ट छैन।”
द इन्स्टिच्युट अफ क्यान्सर रिसर्चका वैज्ञानिक डा। सोमेकर भन्छन्, “क्यान्सरको खतराको तस्बिर धेरै नै जटिल छ। त्यसैले यो बुझ्नु जरूरी छ कि केही मान्यताका आधारमा नयाँ अध्ययनहरू गरिएका छन्।” उदाहरणका रूपमा चुरोट र रक्सी पिउँदा पर्ने प्रभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्न गाह्रो छ। अध्ययनमा क्यान्सरका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ। तर अन्य खाले रोगबारे चर्चा छैन। चुरोट पिउनेहरूलाई मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू धेरै लाग्ने मानिन्छ। उक्त अनुसन्धानमा सन् २००४ को तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ र क्यान्सरका अन्य कारणहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छैन। उमेर, वंशाणु, खानपान र जीवन शैली पनि क्यान्सरको कारण हुनसक्छ।
नटिङ्गम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जन ब्रिटन भन्छन्, “मलाई लाग्छ मान्छेहरू खतराको तुलना गरेर चुरोट वा रक्सीको चयन गर्छन्।” उनी यूके सेन्टर फर टोबाको एन्ड अल्कोहल स्टडिजका निर्देशक हुन्। उनी भन्छन्, “यो अध्ययनका अनुसार चुरोट पिउनु रक्सीका तुलनामा बढी खतरनाक छ। अन्य रोगको कुरा गर्ने हो भने त चुरोट रक्सीभन्दा धेरै नै खतरनाक छ। यदि चुरोट पिउनेहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छन् भने उनीहरुका लागि सबैभन्दा राम्रो भनेकै चुरोट पिउन छाड्नु हो।” उनी रक्सी पिउनेहरूलाई सरकारी निर्देशिका अनुसारकै मात्रामा रक्सी पिउन सुझाव दिन्छन्।-एजेन्सीको सहयोगमा
आज लुतो फाल्ने दिन : के हो सुके-लुतो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुनर्संचना गरेर नमूना बनाउँछु : मन्त्री ढकाल
प्रचण्ड-माधवसँग कुरा नमिलेपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए आफूनिकट नेता
आखिर जीवनको खुसी के मा रहेछ त ?
झापामा खोलामा डुबेर ३ बर्षीय बालकको मृत्यु
नेपालमा संक्रमितको संख्या १७३४४ पुग्यो, आज थपिए कोरोनाका नयाँ १६७ संक्रमित
नेपालमा अहिलेसम्म ११२४९ जनाले जिते कोरोना, थप २१३ जना घर फर्किए
काठमाडौं उपत्यकामा आज थपिए कोरोनाका १ जना नयाँ संक्रमित